Ukumiswa Kwekheli 101: Izinzuzo, Izindlela, Namathiphu | Martech Zone
Ugcine nini ukuthola wonke amakheli ohlwini lwakho alandela ifomethi efanayo futhi ayengenaphutha? Ungalokothi, akunjalo?
Naphezu kwazo zonke izinyathelo inkampani yakho engase izithathe ukuze inciphise amaphutha edatha, ukubhekana nezinkinga zekhwalithi yedatha - njengokungapelwa kahle, izinkambu ezingekho, noma izikhala ezihamba phambili - ngenxa yokufakwa kwedatha mathupha - akunakugwenywa. Eqinisweni, uProfesa Raymond R. Panko kweyakhe iphepha elishicilelwe kugcizelele ukuthi amaphutha edatha yesipredishithi ikakhulukazi amasethi edatha amancane angaba phakathi kuka-18% no-40%.
Ukuze ulwe nale nkinga, ukumiswa kwekheli kungaba yisixazululo esihle. Lokhu okuthunyelwe kugqamisa ukuthi izinkampani zingazuza kanjani ekulinganiseni idatha, nokuthi yiziphi izindlela namathiphu okufanele zicabangele ukuletha imiphumela ehlosiwe.
Kuyini Ukuma Kwekheli?
Ukumiswa kwekheli, noma ukwenziwa kwekheli libe ngokwejwayelekile, kuyinqubo yokuhlonza nokufometha amarekhodi ekheli ngokuhambisana namazinga aqashelwayo esevisi yeposi njengoba ebekwe kusizindalwazi esigunyaziwe njengaleso Isevisi Yeposi yase-United States (USPS).
Amakheli amaningi awalandeli indinganiso ye-USPS, echaza ikheli elimisiwe njengokuthi, leli elipelwe ngokugcwele, elifushanisiwe kusetshenziswa izifinyezo ezijwayelekile Zesevisi Yeposi, noma njengoba kukhonjisiwe efayeleni lamanje le-ZIP+4 Lesevisi Yeposi.
Amazinga Okukhuluma Ngeposi
Ukulinganisa amakheli kuba yisidingo esiphuthumayo sezinkampani ezinamakheli afakwe amafomethi angahambisani noma ahlukene ngenxa yemininingwane yekheli engekho (isb., ZIP+4 kanye namakhodi e-ZIP+6) noma izimpawu zokubhala, izinhlamvu zezinhlamvu, izikhala, namaphutha esipelingi. Isibonelo salokhu sinikezwe ngezansi:
Njengoba kubonakala kuthebula, yonke imininingwane yekheli inephutha elilodwa noma amaningi futhi ayikho ehlangabezana nemihlahlandlela ye-USPS edingekayo.
Ukumiswa kwekheli akufanele kudidaniswe nokumataniswa kwekheli nokuqinisekiswa kwekheli. Nakuba kukhona okufanayo, ukuqinisekiswa kwekheli kumayelana nokuqinisekisa uma irekhodi lekheli lihambisana nerekhodi elikhona lekheli kusizindalwazi se-USPS. Ukufaniswa kwekheli, ngakolunye uhlangothi, kumayelana nokufanisa idatha yekheli efanayo ukuze kutholakale ukuthi libhekisela ebhizinisini elifanayo noma cha.
Izinzuzo Zokumisa Amakheli
Ngaphandle kwezizathu ezisobala zokuhlanza okudidayo kwedatha, amakheli okulinganisa anganikeza uxhaxha lwezinzuzo zezinkampani. Lokhu kubandakanya:
Londoloza isikhathi sokuqinisekisa amakheli: ngaphandle kokulinganisa amakheli, ayikho indlela yokusola ukuthi uhlu lwamakheli olusetshenziselwe umkhankaso we-imeyili eqondile lunembile noma cha ngaphandle kwalapho amameyili ebuyisiwe noma azikho izimpendulo. Ngokwenza amakheli ahlukahlukene abejwayelekile, amahora amaningi okusebenza angalondolozwa ngokuthi abasebenzi bahlunge amakhulukhulu amakheli okuposa ukuze bathole ukunemba.
Yehlisa izindleko zokuposa: Imikhankaso yemeyili eqondile ingaholela kumakheli angalungile noma angalungile angadala izinkinga zokukhokha nokuthumela emikhankasweni yemeyili eqondile. Ukulinganisa amakheli ukuze kuthuthukiswe ukuvumelana kwedatha kunganciphisa amameyili abuyisiwe noma angalethiwe, okuholela emazingeni aphezulu okuphendula imeyili eqondile.
Susa amakheli ayimpinda: amafomethi namakheli ahlukahlukene anamaphutha kungaholela ekuthumeleni ama-imeyili amaningi ngokuphindwe kabili koxhumana nabo angehlisa ukwaneliseka kwamakhasimende kanye nesithombe somkhiqizo. Ukuhlanza uhlu lwakho lwamakheli kungasiza inkampani yakho ukuthi yonge izindleko zokulethwa okumoshiwe.
Indlela Yokwenza Amakheli Afane?
Noma yimuphi umsebenzi wokwenza ikheli lijwayelekile kufanele uhlangabezane neziqondiso ze-USPS ukuze libe wusizo. Ngokusebenzisa idatha eqokonyiswe kuThebula 1, nansi indlela idatha yekheli ezovela ngayo lapho kwenziwa ngokwejwayelekile.
Ukulinganisa amakheli kubandakanya inqubo eyizinyathelo ezi-4. Lokhu kuhlanganisa:
Ngenisa amakheli: qoqa wonke amakheli emithonjeni eminingi yedatha - njengamaspredishithi e-Excel, isizindalwazi se-SQL, njll. - uwabeke eshidini elilodwa.
Idatha yephrofayela yokuhlola amaphutha: yenza iphrofayela yedatha usebenzisa ukuqonda ububanzi nohlobo lwamaphutha akhona ohlwini lwakho lwamakheli. Ukwenza lokhu kungakunikeza umbono oqinile wezindawo ezingaba zezinkinga ezidinga ukulungiswa ngaphambi kokwenza noma yiluphi uhlobo lokumiswa.
Hlanza amaphutha ukuhlangabezana nemihlahlandlela ye-USPS: Uma wonke amaphutha etholiwe, usungakwazi ukuhlanza amakheli futhi uwenze afane ngokuhambisana nemihlahlandlela ye-USPS.
Khomba futhi ususe amakheli ayimpinda: ukuze uhlonze noma yimaphi amakheli ayimpinda, ungasesha ukubala okuphindwe kabili kusipredishithi sakho noma isizindalwazi noma usebenzise ngokuqondile noma ukufana okungaqondakali ukukhipha okufakiwe.
Izindlela Zokumisa Amakheli
Kunezindlela ezimbili ezihlukene zokwenza amakheli abejwayelekile ohlwini lwakho. Lokhu kubandakanya:
Izikripthi zeManuwali namathuluzi
Abasebenzisi bangathola mathupha imibhalo esetshenziswayo kanye nezengezo ukuze benze amakheli abejwayelekile asuka kulabhulali ngokusebenzisa okuhlukahlukene
Amaqoqo ekhodi: I-GitHub inikeza izifanekiso zekhodi kanye ne-USPS API ukuhlanganiswa ongakusebenzisa ukuze uqinisekise futhi wenze amakheli abejwayelekile.
I-Application Programming Interfaces: Izinsizakalo zezinkampani zangaphandle ezingahlanganiswa nge I-API yokuhlaziya, ukulungisa, nokuqinisekisa amakheli okuposa.
Amathuluzi asekelwe ku-Excel: izengezo nezisombululo ezifana ne-YAddress, AddressDoctor Excel Plugin, noma i-excel VBA Master ingakusiza ukuthi uhlaziye futhi ulinganise amakheli akho ngaphakathi kwamasethi wakho wedatha.
Izinzuzo ezimbalwa zokwehla ngalo mzila ukuthi awubizi futhi ungashesha ukwenza idatha ibe evamile kumadathasethi amancane. Kodwa-ke, ukusebenzisa imibhalo enjalo kungahlukana ngaphezu kwamarekhodi ayizinkulungwane ezimbalwa futhi ngaleyo ndlela awafanele amasethi edatha amakhulu kakhulu noma lawo asabalele emithonjeni ehlukene.
Isofthiwe Yokuqinisekisa Ikheli
Ukuqinisekiswa kwekheli elingekho eshalofini kanye nesofthiwe yokwenza kube evamile nakho kungasetshenziswa ukwenza idatha ibe yejwayelekile. Ngokuvamile, amathuluzi anjalo eza nezingxenye ezithile zokuqinisekisa ikheli - njengesizindalwazi esihlanganisiwe se-USPS - futhi anezingxenye ezingaphandle kwebhokisi zedatha yokuphrofayilisa kanye nezingxenye zokuhlanza kanye nama-algorithms angaqondakaliyo okulinganisa amakheli esikalini.
Kubalulekile futhi ukuthi isoftware ibe nayo I-CASS ukunika isitifiketi kusuka ku-USPS futhi ihlangabezana nomkhawulo wokunemba odingekayo ngokuya ngale:
Ukufaka ikhodi enamadijithi angu-5 - ukusebenzisa ikhodi ye-ZIP enamadijithi angu-5 engekho noma engalungile.
Ukufakwa kwekhodi kwe-ZIP+4 - ukusebenzisa ikhodi enamadijithi angu-4 engekho noma engalungile.
Inkomba Yokulethwa Kwezindawo Zokuhlala (RDI) - ukunquma ukuthi ikheli elokuhlala noma elokuthengisa noma cha.
Ukuqinisekiswa Kwendawo Yokulethwa (I-DPV) - ukunquma ukuthi ikheli liyalethwa yini noma cha ku-suite noma inombolo yefulethi.
Umzila Othuthukisiwe Wokuhamba (i-ELOT) - inombolo yokulandelana ebonisa ukwenzeka kokuqala kokulethwa okwenziwa ebangeni lesengezo ngaphakathi komzila wenkampani yenethiwekhi, futhi ikhodi ekhuphukayo/eyehlayo ibonisa isilinganiso sokuhleleka kokulethwa ngaphakathi kwenombolo yokulandelana.
Isixhumanisi Sohlelo Lokuguqulwa Kwekheli Elitholakalayo (I-LACSLink) - indlela ezenzakalelayo yokuthola amakheli amasha omasipala basekhaya abasebenzise uhlelo oluphuthumayo lwe-911.
I-SuiteIsixhumanisi® yenza amakhasimende akwazi ukuhlinzeka ulwazi oluthuthukisiwe lwamakheli ebhizinisi ngokungeza ulwazi lwesibili (isuite) olwaziwayo kumakheli ebhizinisi, okuzovumela ukulandelana kokulethwa kwe-USPS lapho bekungeke kwenzeke khona.
Izinzuzo eziyinhloko ukunethezeka lapho ingaqinisekisa futhi ilinganise idatha yekheli egcinwe ezinhlelweni ezihlukene ezihlanganisa ama-CRM, ama-RDBM kanye namakhosombe asekelwe ku-Hadoop kanye nedatha ye-geocode ukuze kukhiqizwe amanani e-longitude kanye ne-latitude.
Ngokuqondene nemikhawulo, amathuluzi anjalo angabiza kakhulu kunezindlela zokujwayela amakheli okwenziwa ngesandla.
Iyiphi Indlela Engcono?
Ukukhetha indlela efanele yokuthuthukisa uhlu lwakho lwamakheli kuncike ngokuphelele kumthamo wamarekhodi akho ekheli, isitaki sobuchwepheshe, nomugqa wesikhathi wephrojekthi.
Tags: +4Ikhodi ye-zip enezinhlamvu ezi-5ukuhlanzwa kwekheliukudonswa kwekhelikhuluma nodokotelaukuhlukaniswa kwekheliukwenziwa kwamakheliukuqinisekiswa kwekheliisofthiwe yokuqinisekisa ikheliApii-cassi-dataladderukuqinisekiswa kwephoyinti lokulethwadpvkakhuluumugqa wokuhamba othuthukisiweGitHublacslinkisixhumanisi sesistimu yokuguqula ikheli elitholakalayopostalprordirdrminkomba yokulethwa kwezindawo zokuhlalasuitelinkisevisi yeposiuspsusps apikuyini ukumiswa kwekheliikheliikhodi ye-ZIPikhodi ye-ZIP